Polyester filament na staple - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd.
Polyester filament na staple iche, polyester eriri filament na staple abụọ na ụdị.polyester filament, bụ ogologo karịa ihe karịrị otu kilomita silk, filament asọfe n'ime a otu.Polyester staple eriri bụ a ole na ole sentimita iri sentimita nke staple eriri.
polyester filament, ka nke polyester filament.Polyester bụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa eri na bụ nnweta aha nke polyester eriri na China.Ọ bụ terephthalic acid (PTA) ma ọ bụ acid citethyl eeth (DMT) na ethylene glycol (MEG) dika ngwa, site na mkpocha ma ọ bụ transesterification na mmeghachi nke oghere nke nkwadebe nke fiber high polymer - polyethylene terephthalate (PET), mere nke eriri site spinning na post-nhazi.
Polyester staple eriri na-mere si polyester (i.e., polyethylene terephthalate, PET, polymerized site PTA na MEG) na mgbe ahụ na akpa eriri mgbe ịcha na eriri.polyester staple, owu ụdị staple na ajị anụ ụdị.
Polyester staple eriri na-eji maka spinning, dị ka na-eme ka ajị anụ, ịkpa ákwà na na;Polyester filament nwere ike n'ozuzu kere atọ na edemede: POY (tupu gbakwasara filament), FDY (n'ụzọ zuru ezu na-adọrọ mmasị filament), na DTY (ala-na-na-agbanwe filament).POY na-bụ-eji maka post-nhazi mmepụta, dị ka mmepụta nke DTY, Dt na ATY. Ọ nwekwara ike ozugbo etinyere na silk akwa ụlọ ọrụ.FDY na-bụ-eji na uwe na akwa ụlọ ọrụ.DTY bụ ezigbo akụrụngwa n'ihi ala na-akpa (weft-akpa, ogologo-akpa) ma ọ bụ igwe-akpa, adabara na-eme ka uwe akwa (dị ka suut, Chiefs), eji ehi ura (dị ka quilt cover, bedspread, ụgbụ anwụnta) na ji achọ isiokwu (dị ka ákwà mgbochi ákwà, ájá ákwà, mgbidi ákwà, ụgbọala n'ime ime mma ákwà).
Long eriri ka silk, obere eriri dị ka owu, otu ogologo eriri na obere eriri, n'ezie, obere eriri ákwà-eche soft, na n'ozuzu na a mgbe ajị.Filament ákwà mere ikwesi, na-agbanwe silk mere soft, onye ọ bụla nwere ya e ji mara, filament agbanwe silk nwere ike ịbụ mbuaha ikpa, interweave.
bipụtaghachiri na: Jin yi search ákwà - zhihu